Famatsiam-bola :HATSANGANA NY RAFITRA MPANARA-MASO -
AccueilRaharaham-pirenenaFamatsiam-bola :HATSANGANA NY RAFITRA MPANARA-MASO
06/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny fahazoan’i Madagasikara ilay vola mitentina 10,6 miliara dolara tamin’ny Conférence des Bailleurs, tany Paris, France, ny faran’ny herinandro teo, nanambara ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, fa hatsangana afaka andro vitsivitsy ny rafitra mpanara-maso ireo famatsiana azontsika.
Tombontsoa lehibe no azon’i Madagasikara tamin’iny fivoriana tany Paris iny, ary tsy nitondra tanam-polo nody ny fitondram-panjakana notarihin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Noho izany mila fanaraha-maso tanteraka ny fampiasana io famatsiana nekena sy avy tamin’ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ireo. Manaraka izany, mba ho azo antoka ihany koa ny fampiasana azy, sns.
Nambaran’ny filoham-pirenena fa mila mazava sy mangarahara ny fampiasana io famatsiana azon’i Madagasikara io. Tsy ekena intsony ny fambotriana firenena amin’ny alalan’ny fanodinkodinam-bola sy fitantanana tsy mazava ary fandanianiam-poana tsy ahitam-bokatra sy zavatra mivaingana, sns.
Ankoatra izay, efa mazava ny mikasika ny famatsiana azon’i Madagasikara tamin’iny Conférence des Bailleurs tany Paris iny fa misy ampahany ho famatsiana eo amin’ny fandraharahana amin’ny sehatra tsy miankina ary ny an’ny sehatry ny mpandraharaha iraisam-pirenena. Noho izany, tsy hilefitra ary hametraka ny rafitra mpanara-maso ny fitondram-panjakana mba hialana amin’ny hosoka sy fampiasam-bola amin’ny tsy marina sy ny fanodinkodinana.